आरजु देउवाको शक्ति ह्वात्तै बढ्यो, प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्लिन् ?
काठमाडौं, ६ पौष । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा तल्लो तहदेखि काम गरेर सभापति सम्म बने । उनी दुईपटक सभापति निर्वाचित भइसकेका छन् । देउवाको जीवनमा डा. आरजु राणा देउवा आएपछि भने उनले झन् राजनीतिक फड्को मारे । राणा परिवारकी आरजु विद्यावारिधी गरेकी छिन् । विदेशमा पढेकी र राजनीति बुझेकी उनले देउवालाई महत्वपूर्ण साथहरु […]
को हुन् स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री : स्वीमिङ च्याम्पियनदेखि बुलडोजर उपनामसम्म !
khasokhas.com कार्तिक २०७८
NepalJapan कार्तिक २०७८
सरकार स्थिर कसरी हुन्छ ?
स्थिर सरकारका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री शासकीय प्रणाली अंगीकार गर्नुपर्छ न्युजिल्यान्डमा एकजना महिला नेतृले चुनाव जितेर देशको नेतृत्व गर्छिन्, हामी फेसबुकमा उफ्रिन्छौँ, अब नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री...